SALAZAMAY ATSIMO - TOAMASINA : Rangahy iray matin’ny hanoanana ny talata 10 avrily lasa teo
Mibaribary ny hantsana eo amin’ny vahoaka sy ny mpitondra. Raha migoka volabe vokatry ny tsangan-tanana fotsiny ireo depiote 79, etsy ankilany kosa malagasy maro no zara fa mihinana ary misy mihitsy ireo tsy mahita harapaka intsony. 12 avril 2018
Nahitana tranga maneho izany tao Toamasina ny talata 10 avrily lasa teo. Rangahy iray manao asa fiambenana no maty nitsirara tao Salazamay Atsimo. Ny angom-baovao no nahalalana fa 60 taona izy io ary monina ao Analankininina Hopitaly Be. Niantso ny polisy sy ny Bmh eo anivon’ny Kaominina ny fokonolona vantany vao nahita ny razana. Nofantarina ny antony nahafaty azy.
Araka ny fanazavana nentin’ny mpitsabo avy eo anivon’ny Bmh, dia matin’ny hanoanana ity rangahy ity. Tranga izay tokony hahamenatra izao fitondrana Hvm izao. Ny filoha izay nihirahira fotoana vitsivitsy lasa izay hoe : « Porofoy amiko fa mahantra ny Malagasy ». Ny mpanohana azy sasany aza dia sahy mandatsa fa « tonga isam-baravarana ny fisandratana dradradradrain’ny Filoha ».
Porofo iray mivaingana anefa izao fa latsaka lalina ao anatin’ny fahasahiranana ny vahoaka ka na sakafo harapaka aza efa manahirana ka ao ny maty vokatr’izany tahaka io niseho tao Toamasina tamin’ny talata io.
SALAZAMAY ATSIMO - TOAMASINA
2018-04-12 20:20:20 par bordeaux 3300
Ino mon fisandratana fisandratana tsis fotony ity.ampagnantenaina raha tsy hainy fanatanterahana NY vahoaka.àla bato ipetrahan io 2 mandat fa tsis vahoaka misy fagnahy hifidy azy am 2030 .vendragna zalahy filoha ity eeeh !!!tsis raha ilagna azy fa hiarovan i emoreg mafy mpitondrn NY kolikoly .
2018-04-12 20:20:56 par bordeaux 3300
Mitady ho very an-javony ny raharaha Mbola Rajaonah, Rolly, Fidèle FANAKORONTANANA FILAMINAM-BAHOAKA (295) 14 janvier 2019 Halefa eny amin’ny Fitsarana amin’izay ny dosien’i Mbola Rajaonah TALE JENERALIN’NY BIANCO (170) 17 janvier 2019 Nanamafy ny fanovana goavana hoentiny ny Filoha Rajoelina FANDRAISANA NY FITANTANANA NY FIRENENA (76) 20 janvier 2019 Tafakatra sivy ireo olona namoy ny ainy MAHAMASINA - FIHOTSAHANA TRANO (68) 20 janvier 2019 Rangahy iray 64 taona maty notetitetehina TSARAVANJA - ANTETEZAMBARO (53) 20 janvier 2019 Nahitana ombivavy bevohoka novonoin’olona AMPITOLOVA BELOBAKA MAHAJANGA (50) 20 janvier 2019